रियालिटी शो ‘द लिडर’ सञ्चालन हुने, रवि लामिछानेले चलाउने – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रियालिटी शो ‘द लिडर’ सञ्चालन हुने, रवि लामिछानेले चलाउने
रियालिटी शो ‘द लिडर’ सञ्चालन हुने, रवि लामिछानेले चलाउने
काठमाडौं – चर्चित रियालिटी शो ‘को बन्छ करोडपति’ नेपाल भित्र्याएको एसआरबीएन मिडियाले नयाँ रियालिटी शो ‘द लिडर’ प्रसारणमा ल्याउने भएको छ ।
बिहीवार राजधानीमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यसबारेमा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की, पूर्वपत्रकार तथा नेता रविन्द्र मिश्र, पत्रकार रवि लामिछाने लगायत उपस्थित थिए ।
यो शो संसारमै फरक खालको भएको आयोजकको दाबी छ । शो मा एक राजनेताको खोजी गरिनेछ, गाउँ गाउँ गएर कुशल नेताको खोजी गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो बिल्कुलै फरक खालको कार्यक्रम भएको र यसले समाजको रुपान्तरणमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले नेपालको राजनीतिक अवस्था औँल्याउँदै राष्ट्रलाई एक राजनेताको आवश्यकता भएको बताइन् ।
यस्तै कार्यक्रममा बाेल्दै रविन्द्र मिश्रले नेता भनेको जनताको सेवक भएको र यस्तै खाले एक व्यक्ति रियालिटी शोले खोज्नमा सघाउ पुर्‍याउने बताए ।
टेलिभिजनबाट समेत प्रसारण हुने यो रियालिटी शो मा डा. बाबुराम भट्टराई, सुशीला कार्की र रविन्द्र मिश्र निर्णायकको भूमिकामा रहनेछन् । आयोजकले दर्शकको प्रतिक्रियाका आधारमा अन्य दुई जना निर्णायक रहने पनि जनाएको छ ।
रियालिटी शोमा देशभरबाट १ सय जना प्रतियोगी छानिनेछ । तीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक जनालाई ‘द लिडर’ चयन गरिनेछ ।
विजेताले काठमाडौंमा एक अपार्टमेन्ट, गाडी र नगद रुपैयाँ २० लाख पुरस्कार हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म कै फरक शो भनिएको कार्यक्रमको होस्ट पत्रकार रवि लामिछानेले गर्नेछन् ।
तोलामा ५ सय रूपैयाँले बढ्यो सुन, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?